YakadhindwaCircuitBoardAssembly - SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD
Yakadhindwa Circuit Board Gungano - PCBFuture
Izwi rakakosha: PKBP inogadzira, Pcb Assembly service Dunhu redunhu gungano
PcbFuture inyanzvi PCB & PCBA inogadzira kubva kuChina. Isu tiri kunyanya inopa yakakwira-chaiyo imwechete-padivi, maviri-mativi akawanda-masenduru pcb, akatungamira aruminiyamu pcb, inoshanduka pcb, zvinhu zvekutenga pcb Kugadzira uye pcb Assembly basa. PCBFuture yakaunza zvigadzirwa zvemberi uye kusimbisa & kurira manejimendi system. Zvichakadaro, Isu takapasa zvitupa zvepasi rose mhando sisitimu se ISO 9001: 2008. Tine zvinhu zvekuverenga zvakakwana uye vepasirese vatengesi.
Nei uchisarudza yedu yakadhindwa redunhu bhodhi gungano:
PcbFuture ine yakakura uye inoshanda zvikamu zvekutenga masisitimu anoshandira iko-kiyi yegungano rePBB nemutengo wakaderera, ine timu yehunyanzvi inoitisa vatengi vedu pcbbzvinhu zvekutenga nekutarisira.
Isu tinopa Pamusoro peGomo (SMT), Thru-Hole (THT) uye musanganiswa wezvose zviri zviviri. Isu tinopawo imwechete kana mbiri-mativi kuiswa.
Isu tinokwanisa kuronga zvinouya mbishi zvigadzirwa, maitiro ekugadzirisa, uye kuyedza kwakanaka, uye zvinogona kukupa iwe neyakanakisa pcb gungano masevhisi kubva kudiki batch kusvika kune kugadzirwa kwakawanda. Munguva yePBB yekumisikidza maitiro, kana paine zvikanganiso zvine chekuita nePCB yekugadzira, mainjiniya edu anozivisa mushumo weDFM.
Isu tinokutumira iwe BOM mutengo neemail mukati maawa makumi maviri nemana.
Nebasa redu reBGA rekumanikidza, isu tinokwanisa kubvisa zvakachengetwa BGA, kumanikidza-weld, tobva tamboisa paPCB nemazvo. Inodhura-inoshanda.
2-32L kuburikidza-gomba bhodhi & HDI
Yakakwira frequency bhodhi
Midzi yekudzivirira bhodhi
Semiconductor bvunzo zvigadzirwa
Inorema mhangura yemagetsi bhodhi
2-6L simbi yepasi bhodhi
2-8L flex bhodhi & Rigid-flex bhodhi
Yapedza chigadzirwa kuyedzwa
Mabhokisi ekuvaka masevhisi
Sourcing yezvikamu uye yakazara pcb gungano
Isu tinopawo masevhisizvine chekuita nekugadziriswa kwePCB uye kugadzirisazve uye kuyedzwa kwemagetsi wedunhu. Midziyo yedu uye gungano maitiro anoenderana neIPC, MIL-Spec, RoHS 5 uye 6 zviyero.
Iine anopfuura makore gumi semutungamiri weindasitiri, PCBFuture ndeimwe yevanogadzira pcb vagadziri muChina. Isu tinodada kugadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, uye nekupa yakachengeteka uye yakabudirira nzvimbo yebasa kune vedu 200 vashandi.
Semumwe wekutungamira pcb kugadzira uye musangano(PCBA) masevhisi, PCBFuture inovavarira kuve neanopfuura makore gumi einjiniya ruzivo mumagetsi ekugadzira masevhisi (EMS) kupa rutsigiro rwevamwe vatengi. Isu takatsunga kuve mutungamiri mune akakosha emagetsi wedunhu ekubatanidza masevhisi.